देखेको लेखेको – Chitwan Post
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र २०, २०७६
भोजनारायण कँडेल :
हा हा (हाँस्दै) ‘भो मलाई पर्दैन। केही दिनको लागि जहो त गरेको छु नि दाइ। मसँग पनि अझै ५ दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न छ।’ यो संवाद एक ग्रील मजदुर र एकजना महिलासँगको हो। ग्रील मजदुर परिवारसहित छन् भने महिला एक्लै घर भाडामा बस्नुहुन्छ। दैनिक ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने आयस्रोत नभएकाहरु आफ्नो टोलभित्र भए विवरण पठाउनु भन्ने वडाबाट प्राप्त जानकारीअनुसार सामाजिक दुरी कायम गरी आवश्यक सावधानी अपनाउँदै हाम्रो टोलभित्र सम्भावित व्यक्तिहरुको पहिचान र सोधपुछमा हिजो बिहान ८ः०० बजे निस्कियौं।
राहत अर्थात फ्रिमा पाइन्छ भनेपछि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने सुनिएको थियो तर त्यस्तो विवरण भर्ने प्रवृत्ति कसैमा पनि देखिएन। सायद यो समय सबैलाई अप्ठरो हो भन्ने बुझ्नु भएर होला। विवरण लिएका मध्ये एकाध परिवार र व्यक्तिलाई अत्यावश्यक महसुस गरियो। तथापि उनीहरुले अझै ४/५ दिनको लागि समस्या नभएको बताएर हार्दिकता प्रदर्शन गर्नुभयो।
यहॉ सवाल घरभेटीको हो। एक दुई जना घरभेटीले आफ्नो घरमा एउटा परिवार पनि भाडामा बस्छन् राहत मिलाई दिनुपर्‍यो भन्नुभयो। ती बहालवालाको किराना पसल थियो। त्यसरी पसल हुनेलाई किन राहत चाहियो र हजुर? यदि खाँचै परेछ भने २/४ दिनको लागि हजुरले पनि त सहयोग गर्दा हुन्छ नि भनेपछि उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार्दै सहयोगी भावना देखाउनुभयो।
हाम्रो टोलीले विवरण सङ्कलन गरेर फर्किसकेपछि भने एकजना महिला मैले राहत नपाउने भएँ भनेर हाम्रो घर अगाडि आएर रुँदै बस्नुभएछ। ताकी उहाँको श्रीमान् मासिक २० हजारभन्दा बढी तलव बुझ्ने र उहाँ स्वयं मजदुरी गरेर आयआर्जन गरिरहने गर्नुहुन्थ्यो। २/३ दिनअघि मात्रै म आफैँ उहाँले भनेर उहाँकै चेकबुकमा २५ हजार रकमको चेक बनाई दिएको थिएँ। मैले जानकारी पाएअनुसार २ कठ्ठा जमिनको मालिक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। के उहाँ राहत लिनेमा पर्नुहुन्छ र ? हो उहाँले राहत पाइन भनेर रोएको भिडियो बनाएको भए कति ताली आउँथ्यो होला, मैले ताली गाली भन्दा पनि सामाजिक न्याय र हालको संक्रमण फैलिएको अवस्थालाई मध्येनजर राखें। हुन त निश्वार्थ सेवामा अरुको आँसु किन देखाउनु पर्‍यो र?
यहाँ मैले भन्न खोजेको राहत बाँड्ने नाममा अन्धाधुन्ध नाम लेख्ने र वितरण गर्ने गर्नुभन्दा कर्म गर्न सिकाउने र आगामी दिनहरुमा पनि आइपर्न सक्ने यस्ता समस्याहरुबाट जोगिन अनावश्यक खर्च कम गरी बचत गरेर राख्ने बानीको बिकास गराउन सिकाउनु पनि आवश्यक छ। यति भन्दै गर्दा राहत वितरण गर्न हुँदैन भन्ने होइन कि वितरण उचित तरिकाले र उपयुक्त व्यक्तिको पहिचान गरी बाँड्नु पनि पर्दछ भन्ने आशय हो। यदि जसले जे मन लाग्यो गर्ने र जो पायो त्यहीलाई रोएको नाटककै भरमा सामान उपलब्ध गराउने भने उनीहरु आगामी दिनमा पनि कमाउने अनि मोजमस्ती गरेर सम्पत्ति उडाउनेतिर उद्दत हुन्छन्। बचत गर्ने भन्दापनि उडाउने मनोवृत्तिको विकास हुन्छ।
महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको टोलमार्फत अति विपन्न परिवारको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिए जसरी राहत वितरण पनि यथासिघ्र वडा हुँदै टोलमार्फत नै वितरण गर्नु आवश्यक छ। सबै नागरिक आ–आफ्नो घरभित्र रहेर लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नु आवश्यक छ। कोरोना भाइरसको कारण चैत ११ गतेबाट घोषणा गरिएको लकडाउनले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका आम नागरिकको दैनकी पक्कै पनि कष्टकर बनेकै छ। यो समयमा आफ्नो छिमेकमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरु देखिए मानवीय नाताले जो कोहीले पनि २/४ दिनको लागि खाधान्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नु पर्छ पनि।
चाइना, इटाली हुँदै अमेरिकामा समेत भयावह अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा पैसा ठूलो कि मानवीयता भन्ने सबैले बुझिसकेकै कुरा हो। त्यसमा पनि खुल्ला सिमाना भएको छिमेकी मुलुक भारतमा समेत भाइरसले ठूलो रुप लिँदै गरेको अवस्थामा नेपाल र नेपाली अझै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। भोलिका दिन अझै कठिन र चुनौतीपूर्ण नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसको लागि मानसिकरुपमा तयारी भई खाद्यान्नको सही सदुपयोग गरौं। राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रभावकारी बनाउन सबैले सहयोग गरौं। वास्तविक दुःखी नछुटून्, सक्नेले लिने प्रयास नगरुन्। बरु सहयोग गर्नतिर लागून्।
चितवनमा किराना पसल खुल्ने
जहाजमा आएकामध्ये दुई जनाको मात्र स्वाब परीक्षण